तिथि मेरो पत्रु » बस सिद्ध Feels कुन महान् चुम्बन लागि शीर्ष सुझाव
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 24 2021 |2मिनेट पढ्न
कुनै पनि रोमान्टिक सम्बन्ध अत्यन्तै आवश्यक भाग छ चुंबन. पुरातन समयमा भएकोले धेरै सम्बन्ध विशेषज्ञहरु चुंबन को महत्व बारे कुरा गरेको छ र अब एक अनुसन्धान ले निष्कर्ष चुंबन को आवृत्ति सम्बन्ध सन्तुष्टि को घोषित स्तर सीधा समानुपातिक साबित गरेको छ कि.
भन्यो अनुसन्धान समयमा यो पत्ता लाग्यो 66% महिला र 59% मानिसहरूको आफ्नो जोडीलाई चुंबन मा राम्रो थिएन किनकी आफ्नो सम्बन्ध समाप्त. यो एक / उनको सम्बन्ध एक लामो समय सम्म चलने एक बनाउन चुंबन को कला सिक्न आवश्यकता कसरी नराम्ररी देखाउँछ. तल ठूलो चुम्बनले लागि केही उपयोगी सुझाव हो.
– सार्वजनिक चुंबन जोगिन प्रयास. हो, तपाईं निश्चित सार्वजनिक छिटो pecks लागि जान सक्नुहुन्छ, तर यो खुला मा बाहिर पनि भावुक नहुन सधैं बुद्धिमानी हो. भावुक चुंबन आफ्नो निजी क्षण सिँगार्ने गर्नुपर्छ र तपाईं बन्द ढोका पछाडि तिनीहरूलाई मा लिप्त वा त्यहाँ जब कसैले तिमीलाई देख्न भने त यो राम्रो हो. निजी दुवै साझेदार अनुमति चुंबन आफ्नो भावुक सबै भन्दा राम्रो मा हुन, जो एक ठूलो चुम्बनले को मुख्य घटक.
– चुंबन जब रोमान्टिक सम्बन्ध संलग्न मानिसहरू अक्सर गाह्रो तिनीहरूको दाँत संग गर्नुपर्छ ठ्याक्कै के बुझ्न पाउन. चुंबन जब तपाईं आफ्नो दाँत व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने, तपाईं निश्चित खराब kisser हो. समस्या धेरै सरल देखिन्छ, तर वास्तवमा यो हटाउन धेरै गाह्रो छ.
– चुंबन जब आफ्नो दाँत आफ्नो साथी चोट अन्त वा पर्याप्त भावुक भएको देखि रोक छैन भन्ने निश्चित गर्न, आफ्नो दाँत बीच आफ्नो साथी गरेको ओठ निचोड जब तपाईं सकेसम्म कोमल हुनुपर्छ. त्यसपछि, बिस्तारै पुल (आफ्नो साथी को ओठ) पछि छ र तिनीहरूलाई आफ्नो दाँत मार्फत सजिलै संग स्लाइड अनुमति. कार्य पनि गाह्रो छैन, के गाह्रो छ तपाईं आफ्नो दाँत को स्थिति को बारे मा सजग छन् भन्ने बुझ्न आफ्नो साथी अनुमति बिना सजग रहन.
– चुंबन गर्दा धेरै Kissers सधैं आफ्नो साथी संग आँखा सम्पर्क गर्न रुचि. हो, Kissers क्षण महसुस गर्न आफ्नो आँखा बन्द पल्ट जब छन्, यो एक सिद्ध चुम्बनले छ भने मात्र हुन्छ. चुम्बन सिद्ध गर्न, तपाईं आफ्नो साथी गरेको छ कि सम्पर्क रूपमा चाँडै आफ्नो ओठ आ आफ्नो आँखा बन्द गर्नुपर्छ. आँखा सम्पर्क गर्नुहोस्; आफ्नो साथी भन्दा आफ्नो आँखाबाट जोश प्रवाह गरौं; एक सिद्ध चुम्बनले लागि नुस्खा छ.
– एक ठूलो kisser चुंबन को अनुभव उनको / उनको साथी लागि बोरिंग गर्न अनुमति दिन्छ कहिल्यै. त्यसैले, के तपाईं चुंबन को कार्य आफ्नो साथी को लागि नरमाइलो छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न तरिकाहरू पर्छ राम्रो kisser हुन चाहनुहुन्छ भने. चुंबन बढी रोमाञ्चक बनाउने एउटा तरिका कार्य मा आफ्नो सम्पूर्ण शरीर मुछिएको हो. आफ्नो हात प्रयोग गरेर आफ्नो साथी शरीर को सबै भन्दा erogenous भागहरु स्पर्शको र बिस्तारै उनको / उनको टाउको मालिश, अनुहार र घाँटी. तपाईंको साथी पक्कै बढी क्षण आनंद ले शुरू हुनेछ.
एक चुम्बनले बनाउन, एक ठूलो चुम्बनले, तपाईं आफ्नो साथी बारी काम गर्न पर्छ. यो काम मा सबै गाह्रो छैन; यो सिर्फ सही मनसाय र आवेग को एक धेरै आवश्यकता